Nagu saabsan - Leadpacks (Xiamen) xirmaynta Ilaalinta Deegaanka Co., Ltd.
Boorsooyinka wax lagu gado
Bacda funaanad / shandad jaakad
Bacda wax lagu gado / boorsada la qaado
Bac fidsan / bac duuban
Bacda Aluminium Aluminium
Leadpacks (Xiamen) Xirmada Ilaalinta Deegaanka Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2009 waxayna u heellan tahay baakadaha caaga ah. Waxaan bilawnay cilmi baaris ku saabsan bacaha noolaha la burburin karo sanadkii 2014, waxaan si rasmi ah u bilawnay soo saarida bacaha noociisa la burburin karo iyo kuwa bacrimin kara 2016. Waxaan sidoo kale helnay taxane taxane ah oo cadeynaya DIN EN13432 la xaqiijiyay, shahaadada ISO, warbixinta baaritaanka FDA, SGS, iyo shatiyada IWM.
Warshaddeenu waxay daboolaysaa aag ka badan 6000 mitir murabac ah waxayna leedahay in kabadan 50 mashiino otomaatig ah, oo ay kujiraan mashiinada afuufa aflaanta, 11-midab mashiinada daabacaadda xawaaraha sare leh, mashiinada sameynta bacda, iwm. Tani ma aha oo kaliya yaraynayso kharashyada wax soo saarka iyo qiimaha, laakiin sidoo kale waxay si wax ku ool ah u hagaajineysaa wax soo saarka wax soo saarka iyo tayada wax soo saarka. Macaamiisheennu ha helaan qiimaha ugu fiican iyo iyo kan ugu tayada fiican iyo adeegga ugu fiican.
"Soo-saar Ammaan ah, Tayada Koowaad" waa falsafadeena warshad. Waxaan haynaa tiro shaqaale farsamo ah oo ku hawlan waayo-aragnimo wax soo saar sanado badan oo ku saabsan warshadaha iyo xirfadlaha QC, waxay leeyihiin dammaanad lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay shuruudaha tayada sare leh, guuleysiga tayada sare leh Sumcadda ayaa ku guuleysatay macaamiisha 58 dal iyo warshado kala duwan.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa 100% bacaha Biodegradable, Bacda Compostable, Bacaha caaga, Bacda xirxirida caaga, Bacaha Shopping, bacaha Boostada, Bacda jiinyeer, Bacda qufulka, Boorsooyinka istaag, Bacda Vacuum, Kiishka cuntada, Boorsooyinka kafeega, Bacaha aluminium aluminium, Qashinka boorsada, Filimka fidinta, duubista Filimka iwm.
Si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan, waxaan leenahay koox naqshadeyn xirfad leh, khadadka wax soo saarka heerka koowaad, iyo adeegga khadka tooska ah ee 24-saac. Adeegga baakada hal-joogsi ayaa buuxin kara wax kasta oo baahiyahaaga baakidh ah.
Dhamaan shaqaaluhu way kugu soo dhaweynayaan inaad soo booqato oo aad hagto warshadeena.
Wada Shaqeeye Iskaashi
Waxaan sidoo kale helnay taxanayaal shahaadooyin la xiriira DIN EN13432 la xaqiijiyay, ISO, FDA, SGS, iyo shatiyada iwm.
Dabaqa 4aad, No. 25, Siming Park, Meixi Road, Tongan Dist., Xiamen City, Fujian, Shiinaha
Su'aalaha Ku Saabsan Badeecadeena, Fadlan Xor U Noqo inaad Nala Soo Xiriirto E-mailka Ama WhatsApp, Isla Markiiba Waan Kuu Soo Jawaabi Doonnaa.